डिभोर्स गरेका २१ नेपाली सेलिब्रेटीहरु ! अहिले के गर्छन ? - Taja Report
Homeमनोरंजनडिभोर्स गरेका २१ नेपाली सेलिब्रेटीहरु ! अहिले के गर्छन ?
July 6, 2018 मनोरंजन Comments Off on डिभोर्स गरेका २१ नेपाली सेलिब्रेटीहरु ! अहिले के गर्छन ?
नेपाली चलचित्र वृत्तमा श्रीमान श्रीमतीबीचको खटपटको खबर खुबै सुनिन्छन् । यतिसम्म की सम्बन्ध विच्छेद हुनु र जोडिनुलाई खासै अनौठो मानिँदैन, यहाँ । बहुविवाह गर्ने चलचित्रकर्मीको लामो पङ्क्तिले यस कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
यो सवालमा नायक–नायिका मात्र होइन, निर्माता, निर्देशक, लेखक र प्राविधिकहरूको लिस्ट पनि लामै छ ।
विवाह पहिलो भए पनि निकै नायिकाहरू कान्छी श्रीमतीका रूपमा भित्रिएका छन् । सम्बन्ध बिच्छेदको फेहरिस्त निक्कै नै लामो बनिसकेको छ ।
आजको सुनको मूल्य बारे आयो खबर